Olee otú adịgide adịgide Hichapụ Ozi na iPhone e
Olee otú adịgide adịgide Hichapụ ozi ederede site na iPhone
"Ọ bụ Akpata oyi wụrụ na-achọpụta na ụfọdụ ederede ozi m ehichapụ ọnwa gara aga ka na-egosi ke Chakwasa ihie search on iPhone. M ga kama enweghị ndị a ozi ederede gosiri elu. Olee otú m nwere ihichapụ kpam kpam ozi ederede site na m iPhone?" Ọ bụrụ na ị chọọ 'ehichapụ ederede na iPhone search' ma ọ bụ 'na-ehichapụ ederede na iPhone Chakwasa ihie', ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị na-ekwu okwu banyere ya. Mgbe aka ihichapụ ozi ederede na gị iPhone, ị chere na ndị na-arahụ. N'ezie, ha ka bụ ndị na gị iPhone, ma na-apụghị ịhụ anya. Na a mgbake ngwá ọrụ, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS, ị nwere ike naghachi ndị a na-ehichapụ ozi ederede site na gị iPhone mfe.
Olee otú adịgide adịgide Hichapụ Ozi na iPhone? Ime ya, i kwesịrị a ọkachamara ngwá ọrụ maka enyemaka n'ihi na ị pụghị ime ka ọ aka. Right now, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ n'ihi nzube a dị na ahịa n'oge ahụ. Wondershare SafeEraser bụ ngwá ọrụ bara uru na-agbalị. Ọ ga-ihichapụ kpam kpam ozi ederede na gị iPhone, na-eme ndị a ozi ederede ruo mgbe ebighị ebi. Ọbụna na Wondershare Dr.Fone maka iOS, ndị mmadụ enweghị ike naghachi ha. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ maka otú ihichapụ kpam kpam ederede na Wondershare SafeEraser.
Ihe dị gị mkpa:
Nzọụkwụ 1 Hichapụ ozi ederede na gị iPhone aka
Enweta Ozi ngwa> mgbata Dezie> enweta na Gụọ gburugburu, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike wepu dum mkparịta ụka gị na iPhone. Ma ọ bụ kpatụ imeghe a mkparịta ụka> enweta na ihe ọ bụla ozi> enweta 'Ọzọ'. Na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihichapụ ọ bụla ozi na mkparịta ụka a gị mkpa. Otú ọ dị, ị na-eche na ị na-ehichapụ ederede site na gị iPhone, ma i nwere ike ịhụ ha Chakwasa ihie. Ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ, i nwere ike iji mgbake software, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS naghachi ndị a na-ehichapụ ozi ederede site na gị iPhone.
Nzọụkwụ 2 Wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị
Get nri ikpe mbipute nke Wondershare SafeEraser. Ọ bụ a desktọọpụ ngwá ọrụ. Ma Windows na Mac na nsụgharị ndị dị. Wụnye na ẹkedori omume na kọmputa gị. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na ya eriri USB. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ ihe omume-achọpụta rụọ gị iPhone-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 3 iṅomi maka ehichapụ ozi ederede
On usoro ihe omume, pịa "ihichapu ehichapụ faịlụ" ke hapụrụ kọlụm. Na nri window, pịa 'Malite'. Na mgbe ahụ usoro ihe omume amalite ike iṅomi maka ozi ederede na ị na-ehichapụ ke nzọụkwụ 1.
Cheta na: Ị nwere ike chọpụtara na e nwere otu nhọrọ "Ihichapu All Data". A nhọrọ bụ n'ihi na ọrụ ndị ga-ere ma ọ bụ na-enye pụọ ha igwe. Site na iji nke a nhọrọ, niile data na ihe iPhone ga-ehichapụ-adịgide adịgide.
Nzọụkwụ 4-adịgide adịgide hichapụ ozi na iPhone
Mgbe iṅomi okokụre, na ị na-enwe ike ego 'Ozi' ka ịhụchalụ niile ozi ị na-aga ka ihichapụ-adịgide adịgide. Pịa 'ihichapu Ugbu a' ka ihichapụ ozi ederede site na gị iPhone kpamkpam.
Cheta na: Iji hụ na ndị a ozi ederede mgbe na-egosi na gị iPhone ọzọ, ọbụna mgbe ị na-eweghachiri site na iTunes ndabere, mgbe ihichapụ ozi ederede na gị iPhone, Wondershare SafeEraser nwekwara deletes mbipụta ndị a ozi ederede gị iTunes ndabere.
Download Wondershare SafeEraser hụ otú ọ na-arụ ọrụ!
Doro Anya Nchọgharị History na iPhone
Hichapụ a na-echetara Permenently si iPhone
Ihichapụ kpam kpam oku History na iPhone
Na-adịgide adịgide Ihichapu iPad Data nke na-ere
Ihichapụ kpam kpam Ndi ana-akpo si iPhone
Permenently Hichapụ Photos si iPhone
Hichapụ Chakwasa ihie Search History na iPhone
Doro Anya iPhone ebe nchekwa iji naputa More nchekwa
Permenently Hichapụ Songs si iPhone
Ihichapụ kpam kpam ozi ịntanetị site na iPad
Olee otú Hichapụ iPad akaụntụ
Hichapụ iPad égwu Permenently
3 Ụzọ iji Hichapụ gị iPhone Ndi ana-akpo
5 Solutions iji Hichapụ Photos si iPhone
Olee otú adịgide adịgide Hichapụ oku History na iPhone
Olee otú Iji Sochie na Hichapụ Your Android ekwentị enweghị Ndepụta égwu
Olee otú kpamkpam Hichapụ Your akporo ekwentị
Esi ọcha Registry na kọmputa
> Resource> Ihichapu> Olee ihichapụ kpam kpam ozi ederede site na iPhone